macosx [wiki ifg]
Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/f/fc65f8cf23599d1f4ff3dcc50f7b9bb6.xhtml failed
Ny mampiavaka azy
Ny fampiasana azy
Ny rindrankajy mandeha aminy
Ny MacOSX (”X” dia “folo” amin’ny isa romana) dia OS mihodina amin’ny milina Macintosh, vokarin’ny orinasa Apple. Vokatry ny fampiarahana ny teknolojia MacOS sy NeXTstep no nipoirany, taorian’ny niverenan’ny mpamorona azy tao amin’ny Apple sy ny nividianany ny orinasa NeXT.
Mampiasa kernel antsoina hoe “mach” izy, izay mitondra sous-systeme antsoina hoe Darwin, anatin’ny fianakavian’ny BSD. Io ilay hoe “Powered by Unix”.
Eo ambonin’io kernel io no misy motera grafika atao hoe Quartz. Avy tany amin’ny orinasa pixar no niavian’ny quartz, ary mitantana ireo fenetres sy fampisehoana sary amin’ny ecran no asany. Izy no misolo ny QuickDraw, ary mitondra zavabaovao maro toy ny fitantanana fangaraharana (transparence), sns. Ny QuickDraw, Quicktime, OpenGl, dia miasa ohatra ny plugin-n’ny Quartz.
Ankoatra izay dia misy ireo API Cocoa sy Carbon, ary koa ny milina virtoaly Java. Ireo no miandraikitra ny rindrankajy mandeha amin’ny MacOS.
Ary farany dia ny interface Aqua. Io nohitan’ny maso rehefa mampiasa MacOsX, izay tena voakaly ny design ka maha tsara tarehy azy. Mbola tsy very ao koa ilay maha mora ampiasaina ny MacOsX.
Mitondra anarana saka dia ireo karazana versions misy: 10.1 cheetah, 10.2 jaguar, 10.3 Panther, 10.4 tiger, ary 10.5 Leopard no ho avy. Ny fahamoran’ny fampiasana azy no tena mampiavaka ny MacOSX, fa eo koa ny hatsaran-tarehiny. Hatramin’izao aloha misy sous-systeme MacOS 9.2 miaraka aminy mba hahafahana mandefa ireo saofitra ho an’ny mac taloha.
Ny macos hatramin’izay dia nanana interface na GUI mora ampiasaina, satria natao ho an’ny olona tsy voatery mahay informatika. Hampiasain’ny daholobe amin’ny filany azy andavanandro izany no nanaovana azy. Hatramin’izao moa izy mbola tsara tarehy, ka ohatra ny lasa haitraitra ny fananana azy.
Hatramin’izay koa dia ny mac ihany no nanana motera grafika natanjaka, dia ny Quickdraw. Toa i Adobe ihany no nipoiran’io motera io, hany ka miaraka tsara amin’ny rindrankajin’i Adobe izy, izay miompana indrindra amin’ny fikirakirana sary. Mbola nihatsara koa io rehefa nosoloin’ny Quartz. Noho izany dia tian’ny maty hanina amin’io taranja io ny mac. Efa mifampitaha amin’ny solosaina pc-windows moa izy amin’izao.
Araka izany dia natao ho milina eny an-tanan’ny olona ny mac, ka tsy nampiasaina ho serveur. Toa ny hanamboarana serveur mac no nampiasana kernel unix taminy, ka nisehoan’ny MacOsX Server zokin’ny MacOsX rehetra.
Efa tsy manahirana aloha izany ny fampiasana ny GUI. Mila fahazarana azy fotsiny. Ireto zavatra ireto no mety hahasamihafa kely azy amin’ny Windows na OS hafa:
Finder no anaran’ny Explorateur-ny. Tsy maintsy mandeha foana ny Finder.
Ctrl+clic ⇔ clic droit; bokotra iray ihany tsinona no amin’ny totoziny. Azo atao tsara mihitsy koa anefa ny mampiasa totozy USB misy bokotra roa sy molette.
Saika azo atao drag-n drop daholo ny rehetra�.
Mampiasa image disque betsaka koa izy, ny logiciel-ny matetika anaty fichier *.dmg no itsinjarana azy.
Rehefa hi-ejecter disque (na hi-demonter image), dia bataina mankao anaty corbeille le izy ...
Barre de menus iray ihany no itambaran’ny rindrankajy rehetra. Ny barre d’outils an’izay rindrankajy actif ihany no miseho
Komandy Unix no ampiasaina amin’ny Terminal.
Ireo API Carbon sy Cocoa no tena mitantana ny rindrankajy mandeha amin’ny MacOsX, ary tsy itovizany amin’ny MacOs taloha koa. Noho izany dia rindrankajy namboarina manokana ho azy mihitsy vao mety (Mbola misy sous-systeme MacOs 9.2 anefa ao anatiny ahafahana mandefa ireo rindrankajy taloha). Ireo rindrankajy Java kosa tonga dia mandeha aminy noho ilay milina Java efa miaraka aminy.
Ireo rindrankajy mandeha amin’ny unix rehetra koa dia afaka mandeha aminy (ireo rindrankajy fahita amin’ny linux ohatra). Unix izy tsinona ary misy API itovizany amin’ny unix sasany. Misy rindrankajy atao hoe X11 mila apetraka anefa mba hahafahana mandefa ireo izay mampiasa fenetres; tsy mipetraka par defaut io fa efa ao anatin’ny cd MacOsX ihany.
Tsara ho fantatra anefa fa:
powerpc fa tsy x86 ny processeur ihodinany hatramin’izao
tsy afaka mampiasa rpm, deb, sns izany hoe ireo binaire ho an’ny OS hafa izy
Noho izany dia mila averina atao kompil ireo rindrankajy unix hapetraka aminy. Indraindray anefa misy fomba ahafahana mametraka azy mivantana avy amin’ny internet, efa vita kompil ho an’ny MacOsX.
Efa nivoaka ny MacOsX mandeha amin’ny processeur Intel x86, ka ny 10.4 Tiger no nisantarana azy.
Fanaovana Dev amin'ny Mac
Angatahana mba hanampy FametrahanaMacOSX izay efa nametraka e)
macosx.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43